सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशतले वृद्धि, ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता ४ हजार रुपैयाँ | प्रदेश पालिका
गृहपृष्ठ अर्थ सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशतले वृद्धि, ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता ४ हजार...
सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशतले वृद्धि, ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता ४ हजार रुपैयाँ
१६ जेठ, काठमाडौंं ।
सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता बढाएर मासिक ४ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । साथै अन्य सबै किसिमका सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि वृद्धि गरिएको छ ।
शनिबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गरेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता एक हजार बढाएका हुन् । बढेको भत्ता १ साउनबाट कार्यान्वयनमा आउने छ ।
अनाथ, दलित, अपाङ्गता भएका र विपन्न परिवारका बालबालिकालाई प्रदान गरिने बाल संरक्षण अनुदानको रकममा एक तिहाई वृद्धि गरिएको छ ।
२०७४ को आम चुनाव अगाडि वाम गठबन्धनले ५ हजार पुर्याउने उल्लेख गरेको थियो भने नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले बृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट घटाएर ६५ मा झार्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर उमेर घटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा आएन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुरुका दुई वर्ष बृृद्धभत्ता बढाएन । तर प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रुपमा बृद्धभत्ता बढ्ने घोषणा गरेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खचिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा वृद्धभत्ता एक हजार बढाएर ३ हजार पु¥याएका थिए । यो वर्ष पनि त्यही भएको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री अधिकारीले २०५१/५२ को बजेटमा सुरु गर्दा मासिक बृद्धभत्ता सय रुपैयाँ थियो । २०६० सालमा अधिकारीले वृद्धभत्ता वृद्धि गरि मासिक १७५ रुपैयाँ पुर्याए ।
२०६५ सालमा बाबुराम भट्टराईले यस्तो भत्तामा भारी वृद्धि गरि मासिक ५ सय रुपैयाँ पु¥याएका थिए । २०७१ सालमा कांग्रेसका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले एक हजार पुर्याएका थिए । अर्को वर्ष २०७२ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले एक हजार रुपैयाँ वृद्धिगरि मासिक दुई हजार पुर्याए । उक्त रकमलाई २०७६ सालमा डा. युवराज खतिवडाले मासिक तीन हजार पुर्याएका थिए ।
Previous articleकर्मचारीको मासिक तलब २ हजारले वृद्धि